Football Khabar » हेभिवेट भिडन्त : रियल मड्रिड र पिएसजीको टिम घोषणा, नेइमारको कमब्याक !
हेभिवेट भिडन्त : रियल मड्रिड र पिएसजीको टिम घोषणा, नेइमारको कमब्याक !
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा भोलि (मंगलबार) एक हेभिवेट भिडन्त हुँदैछ । जहाँ स्पेनिस रियल मड्रिड र फ्रेन्च क्लब पिएसजी समूह चरणअन्तर्गत दोस्रो लेगको तथा समग्रमा पाँचौं खेल खेल्दैछन् । यस खेलका लागि रियलले पिएसजीलाई आफ्नो घर सान्टियागो बेर्नाबेउमा स्वागत गर्दैछ । यो खेललाई सर्वाधिक महत्त्वसाथ हेरिएको छ ।
यसअघि पिएसजीको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा रियल ३–० ले स्तब्ध बनेको थियो । रियल यसपटक पिएसजीलाई आफ्नो घरमा हराएर सो हारको बदला लिने दाउमा छ । सो खेलका लागि दुवै टोलीले प्रारम्भिक टिम घोषणा गरेका छन् ।
पिएसजीले घोषणा गरेको टोलीमा यसअघि चोटका कारण लामो समय मैदानबाहिर रहेका ब्राजिलियन स्टार नेइमारको कमब्याक भएको छ । यो सिजन प्रतिबन्ध र चोटका कारण नेइमारले च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाएका छैनन् ।
तर, मंगलबार स्पेनमा उनी रियलविरुद्ध उत्रिँदा यो सिजन पहिलोपटक च्याम्पियन्स लिग खेल्नेछन् । पिएजसजीले घोषणा गरेको टोलीमा नेइमारसहित अन्य सबैजसो स्टार खेलाडी छन् । गोलकिपरमा केलर नाभासदेखि मिडफिल्डरमा मार्को भेराटी, पाब्लो सराबिया, एन्जल डि मारिया, मार्किन्होस् छन् । आक्रमण लाइनमा इडिसन काभानी, माउरो इकार्डी, केलियन एमबाप्पेसहित नेइमार छन् ।
यता, रियलको टोलीमा पनि सबैजसो प्रमुख खेलाडी छन् । गोलकिपरमा थिबाउट कोर्टुवासहित रक्षापंक्तिमा कप्तान सर्जियो रामोससहित राफाएल भाराने, मार्सेलोलगायत खेलाडी छन् । मिडफिल्डमा टोनी क्रुस, लुका मोड्रिक, कासेमिरो, इस्कोलगायत खेलाडी हुँदा पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा रहेका फेडे भाल्भर्डे पनि टोलीमा छन् । आक्रमण लाइनमा इडेन हाजार्ड, करिम बेन्जेमा, ग्यारेथ बेल, लुका जोभिक र रोड्रिगो रहेका छन् । हाल समूह ‘ए’मा पिएसजी ४ खेलबाट शतप्रतिशत १२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने रियल ७ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति ९ मंसिर २०७६, सोमबार २१:४९